Orana iray andro : Dibo-drano Antananarivo -
AccueilSosialyOrana iray andro : Dibo-drano Antananarivo
Orana iray andro : Dibo-drano Antananarivo
04/12/2018 admintriatra Sosialy 0
Vao orana iray andro dia dibo-drano sahady Antananarivo Renivohitra. Efa niakatra ambony ny rano omaly tamin’ny faritra maro teto Antananarivo, toa an’i Besarety, Petite Vitesse, Ampefiloha, Isotry, Ankazomanga, Andravoahangy, Ambohijatovo, 67ha, Andrefanambohijanahary, Andraisoro, Analakely…Efa nisy ihany ny fanadiovana ny tatatra nataon’ny kaomina, saingy mbola maro ny olona manary fako tsotra izao ao anatin’ireny lakandrano ireny, ka manentsina izany. Efa tery rahateo ny eto Antananarivo, manoloana ny fanorenan-trano tsy manara-dalàna, efa tsy ampy ny tatatra sy lakandrano kanefa tsy mivaky loha fa manary fako anaty Dalle ihany ny mponina. Mandrora mitsilany ny gasy, ary tsy mahagaga raha ho tondraka indray ny rano eto an-drenivohitra amin’ny janoary, na febroary. Marihina fa samy tompon’andraikitra amin’io ny tsirairay, fa tsy hanomezan-tsiny lava ny kaomina sy ny fitondrana foibe raha ny fako narianao isan’andro any anaty tatatra no mampitohana ny fikorian’ny rano, ka tondraka ny tanàna avy eo. Mila hamafisina ny fanentanana ataon’ireo tompon’andraikitra isaka ny fokontany sy ny boriborintany, mba hahatonga saina ny olona fa tsy anaty tatatra no fanariana fako, fa na anaty lava-pako, na amin’ireo toerana efa voatokana hanariana izany. Etsy ankilany, hitohy foana ny orana mandritra ity herinandro ity, indrindra aty amin’ny faritra anatiny, araka ny fanambaran’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro. Hitohy manaraka izany ny iainan’ny olona anaty rano be, indrindra ireo faritra iva. Amin’ny faran’ny herinandro no vinavinaina hikisaka any amin’ny faritra Avaratra Andrefana sy Afovoany Andrefany ny orana. Raha ny maripana indray dia hisy fiakarany tsikelikely, ka ny ambany indrindra amin’ny faritra Avaratra Andrefana sy ny Afovoany Andrefana eo anelanelan’ny 16-27°C. Ny maripana ambony indrindra kosa 28-36°C, any amin’ny faritra anatin’i Menabe sy Atsimo Andrefana.